FANDAHARANA FOTOAM-BITA : Nidoka tena ho nahavita be ny fitondram-panjakana
Niraradraraka nandritra ilay fandaharana fotoam-bita nivoaka tamin’ny sabotsy hariva lasa teo ny fanasongadinan’ny Filoham-pirenena ireo zava-bita sy fotodrafitrasa tafatsangana izay hita ho tsy misy fiantraikany any amin’ny ati-vilanin’ny valala be mandry akory. 4 septembre 2017
Nasongadiny tamin’izany, ohatra, ny fahavitan’ny fanavaozana ny seranam-piaramanidina eny Ivato sy ny fanajariana ny seram-piaramanidina any Nosy-Be. Nambarany fa hampisokatra betsaka amin’ny lafiny fizahantany izany kanefa sokajiana ho olom-bitsy ihany no hahazo tombony dia ireo mpisehatra eo amin’ity lafiny ity.
Ankoatra ireo dia notanisain’ny filoha ihany koa ny fahavitan’ny tetezana, toy ny tetezan’i Kamoro, ny fahavitan’ny ampahan-dalana tany amin’ny Faritanin’i Toliara iny ary teo ihany koa ny fahavitan’ny trano famakiam-boky etsy Antanimbarinandriana. Nisy tamin’ireo fotodrafitrasa tafatsangana no nambarany fa volan’ny fitondram-panjakana madiodio no nanamboarana azy.
Voalaza fa nahavita nanangana sekoly an-jatony izay ny fitondram-panjakana. Any amin’ireo sekoly faran’izay lavitra any ambanivohitra anefa dia miaina ao anaty tsy fandriam-pahalemana lalina ny mponina. Miaina ao anaty tsy fahampian-tsakafo ihany koa noho ny fidangan’ny vidim-piainana ny maro amin’ny vahoaka Malagasy. Na tsara tarehy aza ny efitrano fianarana ka tsy zarizary ny fiainana andavanandron’ireo mponina indrindra fa ireo ankizy madinika dia toa zava-poana ihany izany.
Tokony ho laharam-pahamehana hatrany ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka, indrindra ny fitadiavam-bahaolana manoloana ny fidangan’ny vidim-piaianana sy ny tsy fandriam-pahalemana izay efa mampikaikaika ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Voaresaka ihany ny mahakasika ny tetikasa amin’ilay fanajarina ny tanimboly ho enti-mamoka-bary saingy hatreto dia mbola nofinofy ihany satria vahaolana ho amin’ny androany no tadiavian’ny vahoaka noho ny fahefa-mividy sy ny kapoakam-bary eny an-tsena izay efa tsy zaka intsony.
Maika amin’ny fanasongadinana ireo zava-bita ny fanjakana ho enti-mampiseho fa tena nahavita be teto amin’ny firenena izay heverina ho tafiditra ao anatin’ny kajikajy politika hoentina miatrika ny fifidianana amin’ny taona ho avy. Teny am-pamaranana ny fandaharana dia nilaza ny Filoham-pirenena fa mbola hitohy hatrany ny fananganana fotodrafitrasa, izany hoe tsy mbola hita soritra mihitsy izany izay tena vahaolana hoentin’ny fitondrana manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny vidim-piainana miakatra isan’andro.